3 ịmata banyere oké ifufe | Netwọk Mgbasa Ozi
na oké ifufe Ha bụ ihe ngosi dị egwu, mana ị maara ihe niile gbasara ha? Eziokwu bụ na a ka nwere ọtụtụ ihe nwere ike iju anyị anya, ma ole na ole nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ha na ọnọdụ ihu igwe ndị a nke na-enwu gbaa n’eluigwe, ọbụlagodi n’oge ọkọchị.
Ọzọ m ga-agwa gị otu 3 ịmata ihe banyere oké ifufe na, ikekwe, mee ka ị jiri anya dị iche iche hụ ha.
1 Amụma nwere ike ife ụgbọelu
2 Ọ bụrụ na oké mmiri ozuzo jidere gị, ị nweghị ike ịme ihe ụfọdụ
3 N’oge ọkọchị enwere oke ikuku
Amụma nwere ike ife ụgbọelu
Ee, n'ezie: ha nwere ike ịda, mana ọ nweghị ihe ga-eme. Elu nke ụgbọ elu ahụ, nke na-ekpuchi ahụ, bụ nke aluminom, nke bụ igwe na-eduzi ọkụ eletrik n'ụzọ ga-eme ka ọ pụọ n'èzí mgbe niile, na-egbochi ya ịbanye n'ime. Ee, a ga-edobe ya n'ụzọ zuru oke, ma n'ime ma n'èzí, ebe ọ bụ na ọ bụghị na enwere ike inwe nsogbu, dịka o mere ụgbọelu PanAm na 1963.
Ọ bụrụ na oké mmiri ozuzo jidere gị, ị nweghị ike ịme ihe ụfọdụ
Ugboro ole ka ị nụtụrụla na ị nweghị ike iji aka gị metụ oghere nkwụnye ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị mmiri? Nke a nwere ihe kpatara ya, na nke ahụ bụ na mmiri bụ ezigbo onye na-eduzi ọkụ eletrik, nke ọ bụla mgbe ọ batara anyị aka, agaghị ewe ihe ọ bụla iji ruo n'obi ma kpatara anyị, ma ọ dịkarịa ala, nnukwu ụjọ. Otu ihe a na - eme n’oké ifufe: Nweghi ike iji ngwa eletrik ọ bụla, ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka, ma ọ bụ ị nwere ike ikwu na ekwentị ahụ.
N’oge ọkọchị enwere oke ikuku
Ọ na-atọ ọchị, ọ bụghị ya? Mana ee, ee. N’oge ọkọchị enwere oke ikuku. N'ihi gịnị? Ọfọn, nke a bụ n'ihi na ikuku dị ọkụ n'ihi oke okpomọkụ ma ya mere ọ na-adịwanye ọkụ ka ọ na-arị elu ngwa ngwa ma gbasaa. Ya mere, ọ na-abanye na kọntaktị nke ikuku oyi, na-eme ka ụmụ irighiri mmiri ndị a gbakọta. N'ihi ọdịiche a nke oyi na okpomọkụ, oké ifufe na-ebute nke, ọ bụ ezie na ha na-ewekarị obere oge, na-adị oke njọ.
You maara ihe ndị a banyere oke ifufe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » 3 ịmata ihe banyere oké ifufe
'' Ọnwụ nke oge oyi '' na-eme ka ndị sayensị mara